Toetra manintona sy hetsika any India | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | India, Ocio, Fitsangatsanganana any Azia
Raha te-ho any India ianao dia mety mikasa ny hanao dia lavitra, ara-dalàna izany. Ny fitsangatsanganana any India dia maharitra fotoana fohy vao hankafizana izay rehetra natolony, fohy ny dia mandritra ny andro vitsivitsy. Inona koa, Raha te-hitsangatsangana any India ianao dia tokony hahafantatra tsara ny toerana tianao hipetrahana ary ny teti-bola anananao. Any India dia misy ny vidiny isan-karazany, saingy miankina amin'ny tsiro manokana azonao arakaraka ny vidiny azonao atao miaraka amin'ny fampiononana bebe kokoa na kely aza.
Fa ankoatra ny fiheverana izany rehetra izany rehefa mandeha any India, ianao koa dia te hahafantatra izay zavatra manintona sy hetsika ankafizin'izy ireo mba handaminana tsara ny dianao. Androany aho te hiresaka aminao momba ny sasany amin'ireo manintona sy hetsika manan-danja indrindra any India mba hahafahanao manapa-kevitra tsara kokoa ny dia.
Any India dia afaka manana manintona sy hetsika maro hatao ianao, ankoatry ny fitsidihana toerana tsy mampino mba hankafizanao fialan-tsasatra na dia tsara.
1 Ny tanànan'i Delhi
2 Fitsidihana ny maosolika Taj Mahal mahafinaritra
3 Ireo valan-javaboary any India
4 Tany Efitra Lehibe any India
5 Toerana masina
6 Asa atao
Ny tanànan'i Delhi
Mizara roa i New Delhi, Old Delhi sy Modern na New Delhi. Ity farany dia tanàna maoderina misy hetsika maro hatao ary ny famoretana maoderina izay hanala anao. Old Delhi dia manana arabe tery sy tempoly tsy mampino, tsy isalasalana fa maro ny mpitsidika izay maniry ny ho very any Dehli fahiny. Tsy ho afaka tsy hahita ny Fort Red sy ny Jama Masjid ianao, Moske lehibe indrindra any India, tsy azonao hadinoina ihany koa ny Outab Minar Tower tsara tarehy.
Raha te-hahita sary mahatalanjona ianao Tsy ho hadinonao ny fitsidihana ny Telozoro Volamena. Ny Triangle Golden dia miorina amin'ny tsipika iray manelanelana an'i Delhi, Agra ary Jaipur. . Ao amin'ny zoro atsimo amin'ny telozoro dia i Agra, fantatry ny Taj Mahal. Amin'ny zoro atsimo andrefany dia misy an'i Jaipur any Rajasthan, tranon'ny Amber Palace sy ny Palace of Winds.
Fitsidihana ny maosolika Taj Mahal mahafinaritra
Ny Taj Mahaj ao Agra dia fantatr'izao tontolo izao ary mausolera marbra fotsy goavambe izay naorina teo anelanelan'ny 1632 sy 1653 izy io tamin'ny alàlan'ny baikon'ny Emperora Mogo Shan Jahan ho fahatsiarovana ny vady tiany indrindra. Ny Taj Mahal dia antsoina koa hoe: "ranomaso amin'ny takolaky ny mandrakizay" ary iray amin'ny sangan'asan'ny maritrano Mughal ary iray amin'ireo tsangambato lehibe indrindra ao India.
Ary koa, ny dome fotsy an'ny Taj Mahal mausolika marbra izy io ary ampidiriko ny trano tsara tarehy hafa, ny rano, ny zaridaina haingon-trano midadasika misy hazo, voninkazo ary hazo kely. Hatsaran-tarehy izany raha hitanao amin'ny olona voalohany dia tsy ho afaka hamela anao tsy hiraharaha izany.
Ireo valan-javaboary any India
India dia tsy latsaky ny valan-javaboary 70 ary ny ampahany amin'izany dia manana tahiry tigra 24 sy toeram-piarovana biby 400 any amin'ny firenena.. Mba hananana fotoana hitsidihana azy rehetra dia mila fialan-tsasatra amam-bolana ianao ... ka ny hevitra iray dia ny mitady vaovao amin'izy ireo tsirairay avy ary amin'izany fomba izany no ahafahanao misafidy ilay tianao indrindra haleha na ilay iray akaiky ny toerana honenanao.
Ny tigra indianina sy ny elefanta aziatika dia manerana ny faritra, fa raha te hahalala ny faritra voajanahary nalaza indrindra ianao ary te-hitsidika azy hahafahanao mifankatia amin'ny zavatra rehetra atolotra azy, dia aza hadino izany Valan-javaboary Bharatpur any Rajasthan ary valan-javaboary Bengal Sundarban.
Tany Efitra Lehibe any India
Any avaratra atsinanan'i India dia ahitanao ny Efitra Lehibe antsoina koa hoe Thar. Ity tany efitra ity dia mahatratra 804 kilometatra ny halavany ary 402 kilometatra ny sakany. Saika tsy misy! Misy tanàna manerana an'ity tany efitra ity toa ny tanànan'i Rajhasthan any an'efitra ary raha mitsidika azy ireo ianao dia ho hitanao fa tena manaitra izy ireo. Ny tanàna malaza hitsidika azy dia ny Jaisalmer noho ny Desert Festival izay natao tamin'ny volana Janoary sy Febroary na ny tanànan'i Pushkar izay nanaovana ny Camel Fair tamin'ny Novambra.
Ho fanampin'izany rehetra izany, dia afaka mahita trano mimanda, lapa ary tempoly manan-danja ara-tantara sy ara-maritrano.. Fa raha te hitsidika an'i Rajhasthan ianao dia tsy ho afaka hanadino an'i Udaipur, toerana tsara haleha miaraka amin'ny namanao satria tena tantaram-pitiavana. Alao an-tsaina ange raha romantika be ka misy ny olona miantso ity toerana ity hoe "Venise of the East". Ny tanàna dia miorina manodidina ny farihin'i Pichola ary ny Lake Palace dia toerana iray ahafahanao mijanona afaka miaritra ny fiainana any an'efitra (misaotra ny farihy).
Angamba mety fantatrao fa India dia iray amin'ireo toerana ara-pinoana indrindra ary izany no antony tsy hahafahanao tsy mahita ny toerana masina sasany, na dia maro aza ny fivavahana isan-karazany izay miara-miaina. Manaja ny finoan'ny tsirairay ny olona, ​​ary ohatra tsara amin'ny fandeferana ara-pinoana ho an'ny rehetra.
Ny fivavahana manjaka ao India dia Hindoa ary azo lazaina mihitsy aza fa iray amin'ireo fivavahana tranainy indrindra eran'izao tontolo izao izy. Ny rafitra caste Hindou dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiainana sy ny fiarahamonin'ny olona ao India. Iray amin'ireo toerana manan-danja indrindra tokony tsy hanadinoanao ny fotoana hitsidihanao azy dia i Varanasi, izay ivon-toerana ara-pinoana eo amin'ny tontolon'ny Hindoa ary manana mpivahiny an'arivony sy an'arivony isan-taona.
Tokony hitsidika an'i Puri any amin'ny moron'ny Bay of Bengal ihany koa ianao izay ivon-toerana fivahinianana lehibe indrindra any India ary fantatra noho ny Tempolin'i Jagannat.
Ankoatr'izay, manerana an'i India dia misy toerana misy azy koa fivavahana hafa toa ny Buddhism, Sikhism, ary ny kristianisma.
Fa raha ankoatry ny fahalalana ny maritrano, ny mponina ao aminy, ny tempoly ary ny lava sns, dia tokony ho fantatrao koa fa any India dia misy toerana mifandraika amin'ny fanatanjahantena mampientanentana hahafahanao miala sasatra. feno hetsika sy adrenaline.
Afaka mahita tendrombohitra hitsangatsangana amin'ny ririnina, renirano ary riandrano ianao hanao fanazaran-tena amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny rano, morontsiraka, ala mahatalanjona ... Any India dia afaka manao ambaratonga, ski, fitsangantsangana, hazakazaka, rano ary fanatanjahan-tena mety hitranga ianao ... Tsy mila misafidy ny toerana sy ny hetsika tianao hatao fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Toetra manintona sy hetsika any India